PressReader - Ilanga: 2019-01-14 - Ubulwane umfundi ebulawa eyobhalisa enyuvesi
Ubulwane umfundi ebulawa eyobhalisa enyuvesi
Unina uyazisola ngokumncenga ukuba aye enyuvesi yaseGoli
Ilanga - 2019-01-14 - Front Page - SKHOSIPHI MTHEMBU
UYAZISOLA owesifazane waseMpola, KwaNgcolosi, eThekwini, okugwazwe kwabulawa indodana yakhe iyoqala ukufunda iChemical Engineering e-University of Johannesburg (UJ), eGoli.
Ukhala uyazithulisa uNkz Ntokozo Ndaba ongunina ka-Aphiwe Ngcobo (17) obefunda eMyeka High School, eMaphephetheni ogwazwe ngabantu abangaziwa ephuma ukuyobhalisa kule nyuvesi. Kubikwa ukuthi lesi sigameko senzeke ngoLwesihlanu ebusuku kanti kunezinsolo zokuthi ubebanjwa inkunzi.
ILANGA lihambele umndeni kaAphiwe izolo ngeSonto ngenhloso yokuthola ukuthi kwenzekeni. Okufike kwacaca wukuthi umufi ungumuntu owaziwayo endaweni njengoba cishe bonke abantu abakhulume naleli phephandaba besebeyazi indaba yokuthi akasekho emhlabeni.
Kuvele ukuthi ubebuye afundise izingane ezidonsa kanzima ezifundweni zazo. Leli phephandaba lifike egcekeni kunamakholwa kanti umndeni uchaze umufi njengemvu ebingasukeli muntu.
Elandisa ILANGA uNkz Ndaba, uthi kuyimanje uyazisola ngokuhambisa indodana yakhe ukuba iyofunda eGoli.
“Indodana yami iqale ngonyaka odlule ukufaka izicelo ezikhungweni ezahlukene okuhlanganisa nayo i-UJ. Iqale yaya eDUT ngoba bebeyithathile nakhona, kodwa yatshelwa ukuthi kuzomele ibhale izivivinyo ukuze izokwenza kangcono amamaki ayo ngoba lezi zifundo ebifuna ukuzenza, ibithole ngaphansi kancane kunama- phuzu afunekayo.
“Izibhalile lezi zivivinyo yabekwa ohlwini lwabantu abasalinde isikhala. Ngenxa yokuthi nase-UJ bebeyithathile, ngiyitshele ukuthi kungcono iye khona ngoba bonke abantu bayayincoma (i-UJ), bathi umuntu akawusweli umsebenzi uma efunde khona, nomlungu engisebenza kuyena ubeyincoma le nyuvesi.
“Iqale yenqaba ukuya eGoli ikhala ngokuthi kukude kakhulu nasekhaya, kodwa ngayincenga ngoba sengizwe okuhle kodwa ngale nyuvesi. Igcine ivumile, ngayithengela ithikithi lebhasi.
“EGoli ibizofikela komunye umfana walapha ngasekhaya, okunguye obeyisiza nangesikhathi ifaka isicelo kule nyuvesi. NgoLwesine igibelile ibhasi kanti nasendleleni bengilokhu ngiyishayela ucingo ngibheka ukuthi isifikile yini.
“Ngiphinde ngayishayela nantambama yangitshela ukuthi isifikile. NgoLwesihlanu, ihambile yaya enyuvesi ngoba ifuna ukuyoshintsha izifundo zayo njengoba ibifuna ukwenza iChemical Engineering kanti esikoleni bekuvela ukuthi ibhalisele iMechanical Engineering,” kusho yena.
Uthi kube wukugcina kwakhe ukukhuluma nendodana yakhe ngoLwesihlanu njengoba eze wathola umbiko ngoMgqibelo ekuseni ukuthi kayisekho emhlabeni, igwazwe ngabantu abebeyibamba inkunzi iphuma enyuvesi.
“Ngiyazisola ngokuyincenga ukuba iyofunda eGoli, unembeza uyangishaya, ngibona sengathi yimina engibulalise indodana yami. Ibiwusizo kwezinye izingane njengoba ibinekilasi layo lapho ebifundisa khona ezinye izingane ezi- donsa kanzima,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa aseGoli, uCapt Mavela Masondo, uthi likhona icala lokubulala elivuliwe kodwa okwamanje amaphoyisa asathungatha abasolwa. Uthi ngokombiko, umufi ubehamba nomngani wakhe ngesikhathi kuma imoto eyiBMW emhlophe, kwaphuma abasolwa ababili babakhuthuza maqede bagwaza umufi.
Iqale yenqaba ukuya eGoli ikhala ngokuthi kukude kakhulu nasekhaya...
IZITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA/ NESITHUNYELWE
UKHALA uyazithulisa uNkz Ntokozo Ndaba obelandisa ILANGA ngokubulawa kwendodana yakhe u-Aphiwe Ngcobo ogwazwe wabulawa eGoli eyobhalisa enyuvesi yakhona.